terabytes ၃၃၀ ကို magnet တိပ်ဖြင့်သေးငယ်စွာသိုလှောင်ရန် IBM ကစီမံခန့်ခွဲသည် Gadget သတင်း
terabytes ၃၃၀ ကို IBM ကသေးငယ်သောသံလိုက်တိပ်တွင်သိုလှောင်နိုင်သည်
မကြာသေးမီလများကကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဒေတာသိုလှောင်ခြင်းကိစ္စသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီအများစုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ယနေ့လူသားများသည်သိုလှောင်နိုင်သည်ထက်အချက်အလက်များစွာကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုထင်ရပြီးကျွမ်းကျင်သူအမြောက်အများက၎င်းတို့လုပ်ခလစာများအပါအဝင်ကျွမ်းကျင်သူများစွာဖြေရှင်းနိုင်သည် IBM က, ယနေ့သုတေသီများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများအုပ်စုများစွာရှိသည်သောကုမ္ပဏီ သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်.
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က IBM သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်အံ့သြလောက်အောင်သိုလှောင်ထားနိုင်ခြင်းဟူသောအတွေးဖြင့်အံ့အားသင့်ခဲ့သည် ချုံ့အချက်အလက်များ၏ 330 terabytes သူတို့ရရှိရန်စီမံထားသောအထူးသံလိုက်တိပ်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည် တစ်စတုရန်းလက်မဒေတာသိပ်သည်းဆနှုန်း 201 gigabits IBM ၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာကိုအခြေခံသည်။ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မရှင်းပြခင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစက်မှုလုပ်ငန်းကသိုလှောင်မှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့သံလိုက်တိပ်ခွေတွေနဲ့အဆပေါင်း ၂၀ လောက်ပိုများတဲ့သိပ်သည်းမှုအကြောင်းပြောနေတာပါ။
1 ဒီနေ့စိတ်ဝင်စားဖို့ထက်ပိုနှစ်ပေါင်း 60 ကျော်နှင့်အတူနည်းပညာ
ဒီနေ့စိတ်ဝင်စားဖို့ထက်ပိုနှစ်ပေါင်း 60 ကျော်နှင့်အတူနည်းပညာ
နည်းပညာတစ်ခုအကြောင်းပြောနေတာပါ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်း 60 ကျော်အသုံးပြုခဲ့သည်အသံ၊ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ခြင်းစသည့်ကဏ္manyများစွာနှင့်အမျိုးမျိုးသောကဏ္forများအတွက်အခြေခံတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဂီတသို့မဟုတ်မိသားစုအခိုက်အတန့်များကိုထိုဗီဒီယိုအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်၍ ထပ်ခါတလဲလဲနားထောင်နိုင်သည်။ အိမ်မှာအရင်ကရှိခဲ့တဲ့ကင်မရာတွေနဲ့ကက်ဆက်တွေ။
သိချင်စိတ်နှင့်ဤနည်းပညာကိုဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း ဒီနေ့ခေတ်ကုန်သွားပြီအမှန်တရားကတော့စီးပွားရေးအဆင့်မှာဒီလိုမျိုးသိုလှောင်မှုစနစ်ဟာအဲဒီအချိန်တုန်းကသူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုငွေအများကြီးကုန်ကျခဲ့တယ်။ ဒီတော့ဒီနေ့ဥပမာအားဖြင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်သိုလှောင်ရေးစင်တာများမှာသံလိုက်တိပ်ခွေတွေဆက်ရှိနေသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ကြီးမြတ်ရှိနေခြင်း gigabyte နှုန်းလျှော့ချ.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့များနှင့်သုတေသီများရှိနေသေးသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများမရရှိသေးသော်လည်းလက်တွေ့ဖြစ်လာရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရ ဦး မည်၊ ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီး၊ ဒီ
ဒီအခါသမယမှာဒီနည်းပညာကိုလက်တွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့၊ IBM က ၏ပူးပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့သည် Sony Storage Media Solutionကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံး၏အဆိုအရလာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွက်သံလိုက်တိပ်ခွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်ပူးတွဲကြိုးပမ်းမှု။
ကထုတ်ဝေသောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်စာလုံးပုံပေါ်သကဲ့သို့ IBM က သူတို့ကဒီနည်းပညာအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာ \_ t
အခုဒီနည်းပညာအမျိုးအစားမှာသူ့မှာရှိတယ် အနုတ်လက္ခဏာအပိုင်း ၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီများအားလုံးအတွက်အလားအလာမရှိသောကြောင့်ဤသံလိုက်တိပ်ခွေများတွင်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် IBM ၏ကိုယ်ပိုင်ကြေငြာချက်တွင်ဤနည်းပညာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ အဆက်မပြတ်ရွှေ့ပြောင်းရန်မလိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းပါ ကိရိယာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့သို့မဟုတ်ရန် အချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းဆည်းထားရမည်ကြောင်းဒေတာ ကွဲပြားစရာမလိုဘဲ။
ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ဤသံလိုက်တိပ်သိုလှောင်ခြင်းနည်းပညာသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်နေရာဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: the Verge
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » terabytes ၃၃၀ ကို IBM ကသေးငယ်သောသံလိုက်တိပ်တွင်သိုလှောင်နိုင်သည်
Ariel သည်လျှပ်စစ်စူပါကားကိုမြင်းကောင်ရေ ၁,၁၈၀ အားကတိပြုသည်
Samsung ဒုဥက္ကpresident္ဌကိုထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ချမှတ်